သမိုင်းဆိုင်ရာ၊ ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာဆိုင်ရာ၊ နယ်မြေဒေသဗဟု သုတဆိုင်ရာ၊ ရိုးရာပွဲတော်များဆိုင်ရာ၊ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးနွယ်ဆိုင်ရာနှင့် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ မှတ်သားဖွယ်ရာများကို ကိုယ်တွေ့အဖြစ်အပျက်များ ပေါင်းစပ်ပြီး စိတ်ဝင်စားဖွယ် ရေးဖွဲ့ထားသောစာအုပ် ကောင်းတစ်အုပ်ဖြစ်ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားလေ့လာလိုသူတို့အတွက် ပညာရှင်တစ်ဦး၏ အင်္ဂလိပ်စာအသုံးအနှုန်းကျွမ်းကျင်မှုကို သင်ယူရရှိနိုင်သလို နိုင်ငံခြားသားများအတွက်လည်း မြန်မာခေတ်ဟောင်းမှ ဗဟုသုတများကို ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ နိုင်ငံခြားသားမိတ်ဆွေများအား လက်ဆောင်ပေးသင့်သောစာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ် လည်း ဖြစ်ပါသည်။
The day before he left for London Bogyoke Aung San called me to his office and described to me for nearly an hour how we should whip up mass support for the negotiations in London withacrescendo of strategic broadcasts. In the words of an English captain, "The Director continually fed the progarmme staff with articles from. The Myanmar Review and translations from various sources all in support of Myanmar's fight for freedom earning reproofs from the Director of public relations who warned BBS not to beapartisan." As if Myanmar Broadcasting could help beingapartisan in Myanmar's fight for freedom.